Banijya News | सेयर बजारमा ४७ अंकको गिरावट, किन भयो कारोबार रकम डेढ महिनायताकै न्यून ? - Banijya News सेयर बजारमा ४७ अंकको गिरावट, किन भयो कारोबार रकम डेढ महिनायताकै न्यून ? - Banijya News
सेयर बजारमा ४७ अंकको गिरावट, किन भयो कारोबार रकम डेढ महिनायताकै न्यून ?
साताको दुई दिन बढेको सेयर बजार मंगलबार फेरि ओरालो लागेको छ । धितोपत्र बोर्डले ५१ वटा कम्पनीको अवस्था सार्वजनिक गरेपछि ओरालो लागेको बजार फेरि माथि गएकोमा निषेधाज्ञा खुलेसँगै फेरि आज ओरालो लागेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) का अनुसार आज बजार ४७.५० अंकले घटेर बजार आरालो बिन्दुमा देखिएको हो । बजार १.६५ प्रतिशतले बजार घट्दा नेप्से परिसूचक २८२८ अंकमा झरेको छ ।
आज लघुवित्त समूहमा मात्रै हरियाली छाएको हो । अन्य सबै समुहमा राताम्मे भएका छन् । लघुवित्त समूह २६.४ अंकले बढ्ेको छ ।
बजार परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेर डेढ महिनायताकै न्यून रकमको कारोबारमा आएको छ । नेप्सेमा कारोवारमा ओरालो लागेर वैशाख ३० गतेयताको लयमा फर्किएको हो । यसअघि, जेठ ३० गते नेप्सेमा अहिलेसम्कै उच्च एकै दिनमा १९ अर्ब ५५ करोडसम्मको कारोबार भएको थियो । त्यसयता नेप्सेमा कारोबार रकम लगातार घटिरहेको बजार आज एक्कासी तल्लो विन्दुमा आएको हो । कतिपयले यस्लाई सरकारको निर्देशन पनि भनेका छन् ।
लक डाउन खुलेसँगै बजारमा कही चलहपहल बढेको छ । सरकारले असार २५ भित्र व्यवसायीहरुलाई कर तिरिसक्न भनेको छ । यस्तै, असार मसान्तमा कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने चटारो पनि हुन्छ । यो महिनामा सबैतिर क्लोजिङको चाप हुने भएकाले पनि अर्थको जोहो गर्दा बजार ओरालो लागेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै नेप्सेमा नयाँ अध्यक्षको आगमन पनि बजार घट्नुको कारण भएको केही लगानी कर्ताको भनाई छ । सरकार बजार नियन्त्रण गर्न चाहन्छ परिमाण अर्थमन्त्राका सहसचिब दीर्घराज मैनालीलाई अध्यक्ष बनाएर पठाएको छ ।
आज २२३ कम्पनीका १ करोड ४० लाख ४४ हजार ३ सय ८१ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ७२ करोड ६३ लाख ६१ हजार ८ सय ६९ रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो । बजारमा पहिरो गएको दिन लघुवित्त समूहमा भने लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । आज सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह २५१.५३ अंकले घटेको हो ।